सिल्टल: शीर्ष6विशेषताहरु वेब स्क्रैपिंग सेवा
वेब कटाई इन्टरनेटबाट जानकारी सङ्कलन गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो।. अतीतमा, वेबमास्टरहरू र फ्रिक्यानरहरूले उनीहरूको उत्कृष्ट प्रोग्रामिङ क्षमताहरू मात्र हुँदा डेटा निकाल्न सक्थे, तर अब ठूलो स्क्रिप्ट उपकरणहरू सुरु भएको छ।. मोजाडा एक उत्कृष्ट वेब स्क्रैप प्रोग्राम मध्ये एक हो. यसमा एक प्रयोगकर्ताको अनुकूल इन्टरफेस छ र तपाईंलाई कुनै पनि प्रोग्रामिंग कौशल बिना डेटा निकाल्न अनुमति दिन्छ. मोजाडाका विशेषज्ञहरूले सयौं वेब एजेन्टहरू निर्माण गरेका छन् जुन लाखौं वेब पृष्ठहरू एक घण्टामा प्रशोधन गर्छन्. उनीहरूको गहिरो र चौडाई अनुभव बेकार छन्, र तिनीहरू उच्च-आर्किटेक्चर गर्ने हो र जटिल समस्याहरू सुल्झाउँछन्. मोजाडाको सबैभन्दा विशिष्ट विशेषताहरू तल वर्णन गरिएको छ.
शीर्ष फीचर # 1: पढ्न योग्य र स्केलेबल डेटा (1 9)
मोजान्डासँग, यो कुनै पनि को लागी पढ्न मिल्ने र स्केलेबल डेटा स्क्रिन गर्न सजिलो छ।. अन्य साधारण स्क्रैपिंग सेवाहरूको विपरीत, मोजाडाले तपाईंलाई गतिशील वेबसाइटहरूबाट जानकारी हटाउन मद्दत गर्दछ. यसले बेकार लिंकहरू बार्दछ र तपाइँलाई छिटो डेटा चाहेको छ. यसबाहेक, मोजाडाले लक्षित वेबसाइटहरूमा एक हल्का पदचिन्ह सिर्जना गर्न सजिलो बनाउनु भएको छ जुन तपाईले सकेसम्म धेरै वेब पेजहरु लाई स्क्रैप गर्न को लागी बनाउनु भयो।.
शीर्ष फीचर # 2: त्रुटि-रहित डेटा (1 9)
ठूलो संख्याको वेब स्क्रैपिंग उपकरणहरू डाटा निकाल्नुहोस्, तर यसले धेरै हिज्जे र व्याकरणिक त्रुटिहरू समावेश गर्दछ।. ती सेवाहरूको विपरीत, मोजाडा तपाईले सही र त्रुटि-रहित डेटालाई छोटो समयमा प्राप्त गर्नुहुन्छ. यदि तपाईं धेरै वेब पृष्ठहरु लाई स्क्रैप गर्न चाहानुहुन्छ र गुणस्तरको बारे चिन्तित हुनुहुन्छ भने, तपाईंले तुरुन्त मोजाडालाई प्रयास गर्नुपर्छ. यसले तपाईको डेटा मात्र स्क्रैप गर्दछ तर यसको गुणलाई पनि निगरानी गर्नेछ र अन्तिम परिणामबाट सबै गल्तीहरू हटाउनेछ.
शीर्ष फीचर # 3: कुनै पनि अनुरक्षण आवश्यक छैन (1 9)
अन्य वेब स्क्रैपर को विपरीत, मोजाडालाई कुनै पनि मर्मतको आवश्यकता छैन र कुनैपनि समयमा, कहीं पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ. तपाइँसँग पर्याप्त प्रोग्रामिंग कुञ्जीहरू नहुँदा पनि, तपाईं स्क्रैप प्राप्त गर्न सजिलै यो उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ. साथै, यो तपाईंलाई HTML कोड लेख्न आवश्यक छैन. यस प्रकार, मोजाडा प्रोग्रामर र गैर-प्रोग्रामरहरूको लागि समान रूपमा राम्रो छ.
शीर्ष फीचर # 4: व्यापार प्रक्रियाहरूसँग सजिलो एकीकरण (1 9)
आजका डेटा-संचालित व्यवसायिक वातावरणमा, विभिन्न व्यक्तिले डेटा विश्लेषण र डेटा संग्रह प्रक्रियाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्छन्।. कम्पनीले वेब स्क्रैपिंग उपकरणहरूको खोजी गर्दछ जुन गुणस्तर परिणामहरू छिट्टै वादा गर्दछ. मोजाडाको साथ, तपाईं सजिलै संग एक अनलाइन व्यवसाय निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि मुद्दा बिना विभिन्न प्रकारको डेटा स्क्रैप गर्न सक्नुहुनेछ. मोजेडा व्यवसाय प्रक्रियाहरु संग एकीकरण को कारण उद्यमों को बीच मा प्रसिद्ध छ. यो प्रसिद्ध ज्ञात ब्रान्डहरुको लागि राम्रो छैन तर यो सुरुवात र निजी ब्लगहरूको लागि पनि.
शीर्ष फीचर # 5: स्क्रैप गतिशील वेबसाइट (1 9)
मोजेडा एक मात्र उपकरण हो जसले गतिशील वेबसाइटहरु संग काम गर्छ र यसको प्रयोगकर्ताहरु को लागि कच्चे डेटा को आयोजन गर्दछ. तपाईंले लिपि लेख्न र सेकेन्ड भित्र डेटा निकाल्न सुरु गर्न आवश्यक छैन. मोजेडाले तपाईंलाई गतिशील वेबसाइटहरूबाट उपयोगी जानकारी प्राप्त गर्नेछ र अपरिचित डेटा तय गर्नेछ, सही र त्रुटि-रहित जानकारी फिर्ता गर्नेछ।.
शीर्ष फिचर # 6: विभिन्न ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्दछ (1 9)
मोजाडाले डाटा निकाल्नेछ र यसलाई CSV, JSON, XML र XLS ढाँचामा रूपान्तरित गर्नेछ।. तपाईं या त डाटाबेस आफ्नो डाटाबेसमा बचत गर्न सक्नुहुनेछ वा सजिलै संग तपाईंको हार्ड ड्राइभमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. साथै, मोजाडा प्रयोगकर्ताहरूको लागि पाठ र तस्विरहरू दुवै स्क्रैप गर्न सक्दछ Source .